Kôlômbiàna sy Shiliàna mpitsabo aretin-tsaina, miangavy ny handraisana an-tànana ny fahasalaman’ny saina amin’ny fisorohana ny fanjifàna tafahoatra ireo vaovao (diso) momba ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Tokony hosorohana amin'ny fomba rehetra ny fandisoambaovao
Voadika ny 06 Septambra 2020 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Português, русский, Français, English
Sary tao amin'ny Pexels, mampiasa ny lisansa Pexels
Manahy momba ny hoaviny i Claudio Gonzalez, lehilahy shiliàna iray monina irery ao Punta Arenas, ary amin'ny farany atsimo amin'i Shily. Malahelo ny fifanereserany taman'olona izy, ary mandany ny fotoanany miaraka amin'ireo havan-tiany. Rehefa latsaka anaty hadisoam-panantenana, mandray fanafody miady amin'ny rarintsaina izy, tsy misy taratasy avy amin'ny dokotera. Raha mbola mitohy miparitaka ny valanaretina COVID-19, ireo manampahaizana manokana momba ny aretin-tsaina kosa miahiahy fatratra momba ny ho fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny sain'ny olona. Ireo vaovao diso, fandisoambaovao, ary ny toerian'ny tsikombakomba, raha ny hevitr'izy ireo, dia tsy manao afa-tsy ny mampitombo ny tebiteby.
Tamin'ny May sahady, ny vondrona ho Fanatratrana Fampandrosoana Maharitra ao amin'ny Firenena Mikambana dia efa nanitrikitrika fa “na eo aza ny krizin'ny COVID-19, momba ny fahasalaman'ny vatana voalohany indrindra, dia tsimoka iray mankamin'ny krizy iray goavana ho an'ny fahasalaman'ny saina ihany koa izy io, raha tsy misy hetsika atao.”
Ao Shily, Daniela Salinas, psikôlôgy iray avy ao amin'ny Universidad Mayor ao Santiago, no nandalina ny fiantraikan'ilay valanaretina amin'ny fahasalaman'ny sain'ireo Shiliàna. Hitan-dramatoa io fa 66 isanjaton'ireo olona 600 narahana maso no nahitàna ny soritry ny fitebitebena nandritra ny fotoana fihibohana, ary 40 isanjato no nahitàna soritry ny rarintsaina. Hitan'ilay fanadihadiana ihany koa fa nisy fitomboany ny fidorohana zavamahadomelina, alikaola, ary ny fanjifàna sigara nandritra ny fihibohana, tafakatra hatramin'ny 14 isanjato raha ny sigara manokana no resahana.
Izao koa, i Juan Carlos Almonte, Shiliàna mpitsabo aretin-tsaina, nilaza tamin'ny Global Voices fa tsikariny hoe tena nanova hatrany ifotony ny fomba nahazatra azy ireo rehefa matory ireo mpianatry ny anjerimanontolo; amin'izao fotoana izao dia eo anelanelan'ny amin'ny 5 na 6 ora maraina ka hatramin'ny mitatao vovonana ry zareo no matory, mahatonga azy ireo tsy hisy fifaneraserana amin'ireo havany sy hahazo fonohanana avy amin'ny fianakaviany momba ny tebiteby manjo an-dry zareo.
i Almonte tsy mandrisika ny olona hampiasa ireo fanadody fitsaboana aretin-tsaina, izay asaina hanina mandritra ny fotoana maharitra. Mino ihany koa izy fa ireo fanentanana momba ny aretin'ny saina dia tokony hafantoka amin'ny hetsika tsy ampiasàna fanafody.
Atosik'ireo vaovao mifandraika amin'ny COVID-19 ny tebiteby sy rarintsaina, saingy mety koa hiharatsy noho ireo fandisoambaovao sy fanjifàna tafahoatra ny vaovao, hoy ireo manampahaizana manokana.
Salome Castro, vehivavy Kôlômbiàna iray, nahamarika ny toetra feno tebiteby nananan'ny rainy, 80 taona, taorian'ny nihainoany ireo vaovao tamin'ny TV sy fampielezampeo. Ary koa, raha ny heviny, nampiasaina ny media sôsialy nandritra ity krizy ity ho toy ny fantsona fanamaivanana fihetsehampo sy fanehoankevitra ; izany no antony mahatonga azy mitandrina be amin'izay votoaty jereny. Claudio Gonzalez, lehilahy shiliàna, ihany koa dia misafidy ny hanaraka ny lazain'ireo mpitsabo mpanao vonjiaina ao amin'ny Facebook, izay fantany fa mizara torohay azo ianteherana sy manaraka ny zavamisy. Maty tamin'ny 19 Martsa ny vata fahitalavitrany, izay nitondra fitoniana kely ho azy.
Edwin Herazo, Kôlômbiàna mpitsabo aretin-tsaina, nilaza tamin'ny Global Voices fa mampitombo be ny mety hiainan'ny olona tahotra ny fandisoambaovao; sosokevitra arosony ny hitondràna ny vaovao amin'ny fomba matotra fa tsy entin'ny fihetsehampo fotsiny.
Toy izany ihany, Fernando Valadez, iray hafa mpitsabo aretin'ny saina, manazava hoe ny tebiteby dia miteraka fiankinandoha amin'ny vaovao, ary io fiankinandoha io koa miteraka tebiteby. “Fahazarana ratsy tsy maintsy ialàn'ny olona io amin'ny fahatsapàna ny fotoana laniany ety anaty tambajotra, fa tsy mitazona ireo fomba fanaony andavanandro madio, toy ny fanaovana fanatanjahantena na fakàna aina kely,” hoy izy tamin'ny GV. Adalberto Campo, Kôlômbiàna iray hafa mpitsabo aretin-tsaina, nanampy hoe ireo manampahefana misahana ny fahasalamana dia tokony hanara-maso akaiky ny vaovao diso ety anaty media sôsialy.
Ny torolàlana iray novokarain'ny Anjerimanontolon'i Shily dia misisika amin'ny hoe zavadehibe ho an'ny fahasalaman'ny saina ny fandrakofana ataon'ny mpilaza vaovao. Voatoaty mazava sy azo ianteherana no afaka hanampy ny olona handrindra samirery ny fitondrantenan'izy ireo. Fanampin'izany, azon'ny olona atao ny manaraka ireo torohevitra ara-pahasalamana omen'ny OMS, toy ny tsy dia fanarahana loatra ireo faham-baovao izay mahatonga ny olona hitebiteby sy hikorontan-tsaina.
Raha resaka famoizana aina, dia nandona an'i Shily sy Kôlômbia ny COVID-19 — 11.442 sy 20.348, ny isan'ny maty tany amin'ireo firenena ireo, araka ny tarehimarika ofisialy — fa koa ara-toekarena, faharefoana tamin'ny asa sy tsy fisian'ny fahafahana nahazo sakafo.
Ny fandalinana iray nataona fikambanana tsy miankina Profamilia nivoaka tamin'ny May lasa iny dia nampiseho fa ny hatezerana, ny alahelo, ny fikorotanan-tsaina ary ny tebiteby vokatry ny fiharatsian'ny ara-toekarena dia hita teny anivon'ireo Kôlômbiàna ary 56% no matahotra ny ho voan'ny rarintsaina. Ny fikambanana nasiônalin'ireo Kôlômbiàna mpitsabo saina, Colegio de Psicólogos, dia nitaky tamin'ny governemanta ny hametrahana paikady nasiônaly hiatrehana ny rarintsaina, ny tahotra ary ny tebiteby nateraky ny valanaretina, araka ny sosokevitry ny OMS.
Noho izany, ho an'ireo mpitsabo aretin'ny saina, tena zavadehibe ny fanànana fisainana tony sy salàma mba hiatrehana ilay valanaretina. Tany am-piandohan'ny fotoana fihibohana, Rosi Gaviria, Kôlômbiàna injeniera, dia nihaino ireo pôlitisiàna, saingy nikisaka hihaino ireo mpahay siansa, sy mpitsabo, ary ireo angondrakitra avoakan'ny OMS mba hialàna amin'ny teorian'ny tsikombakomba, ny vaovao diso, ary ny fandàvana, hoy izy tamin'ny Global Voices.
Toy izany koa i Roberto Uribe, Kôlômbiàna mpisolovava, dia mampiasa ireo media mpampahalala vaovao fanta-bahoaka, ary ireo mpitsabo mendri-kaja, ho toy ny loharanom-pahalalana fototra, tsy miraharaha ireo fanehoankevitra tsy manana fototra ara-tsiansa, ireo mpitasbo izay manolotra fanafody mahagaga sy ireo “mpanao gazety manolotra vaovao efa lany andro ho toy ny hoe fanavaozana vao haingana”, hoy izy tamin'ny Global Voices.